Ny rindranasa Twitter enina tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Twitter dia tambajotra sosialy iray izay niaina fisondrotana sy fiovana maro hatramin'ny nanombohany. Herintaona lasa izay, maro no nihevitra fa maty ity fampiharana ity, saingy nahavita niverina indray ary namokatra vokatra tsara nandritra ny volana maro. Mpampiasa Android an-tapitrisany no mampiasa ny fampiharana. Afaka mahazo bebe kokoa amin'izany isika amin'ny alàlan'ny fampiharana sasany.
Amin'izany fomba izany, handray soa ny zavatra niainantsika tamin'ny fampiasana Twitter amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo rindranasa ireo. Ny fisafidianana misy dia manome antsika fiasa maro samihafa, saingy ilaina izany arakaraka ny zavatra tadiavinao.
Izy rehetra dia noforonina mba hampiasa ny mpampiasa Afaka mampiasa ny tambajotra sosialy amin'ny fomba tsara kokoa amin'ny finday Android ry zareo. Ankoatry ny fanatsarana ny lafin-javatra sasany izay tsy mandeha tsara ao. Araka izany, ireo zavatra manelingelina anao amin'ny tambajotra sosialy ireo dia hijanona tsy ho olana amin'ny fotoana rehetra.
2 Arotsaho ny Twitter
Manomboka amin'ny iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra azonao sintonina ianao mba hivoahana bebe kokoa amin'ny Twitter. Miatrika fampiharana tsara ho an'ireo olona mila mitantana ny mombamomba ny media sosialy izahay. Na avy amina orinasa izy ireo na raha manana bilaoginao manokana. Misaotra an'ity fampiharana ity afaka mitantana ireo zavatra vita an-tsoratra arosonao ao ianao, ankoatry ny fahafahanao mandahatra programa izay rehetra havoakanao. Inona no mahatonga ny fitantanana ireo zavatra vita an-tsoratra ho mora kokoa amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny izahay. Rehefa mandoa dia manana anjara asa fanampiny izahay. Miankina amin'ny fampiasana sy ny asanao dia mety hahaliana anao izy ireo.
Hootsuite ho an'ny tambajotra sosialy
Arotsaho ny Twitter
Amin'ny toerana faharoa dia hitantsika ny iray amin'ireo rindranasa izay efa naharitra ela indrindra tamin'ny Android. Niova be izy io rehefa mandeha ny fotoana, indrindra ny interface misy azy, izay manana layout Material Design ankehitriny. Manome antsika safidy safidy manokana izy io, ary asa fanampiny toa ny fanohanana kaonty maromaro, izay manamora ny fitantanana kaonty maromaro miaraka amin'izay. Azo ampidirina amin'ny Facebook amin'ny fomba tena tsotra ihany koa izy io. Fampiharana tsara izay ahafahantsika mivoaka bebe kokoa amin'ny mombamomba anay amin'ny tambajotra sosialy vorona malaza.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ao anatiny no ahitantsika doka, na dia tsy doka manelingelina na manafika aza izy ireo, soa ihany.
Fampiharana iray hafa natao hanomezana antsika fampiasana tsara kokoa ny tambajotra sosialy. Misaotra an'izany fa afaka hamolavola lafin-javatra maro mifanaraka amin'ny tiantsika izahay, ankoatry ny fiarovana sy ny fiainana manokana, izay zava-dehibe amin'ny mpampiasa. Anisan'izy ireo no ahafahantsika manivana ny bitsiky ny olona na ilay karazana izay tsy tiantsika na mahasosotra antsika. Araka izany, tsy mila mahita atiny tsy mahaliana antsika amin'ny tambajotra sosialy isika. Izy io dia miasa tsara amin'ity lafiny ity, ary toa tsara. Nanatevin-daharana ny fironana amin'ny fampiasana Material Design izy ireo, izay nanjary tsara ho azy ireo. Satria endrika mahafinaritra sy mora ampiasaina izay azontsika arahana amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Tsy fividianana lafo izy ireo, ary mety misy mpampiasa izay mahasoa azy io. Tokony hojerenao raha manonitra anao izy ireo na tsia.
Twidere ho an'ny Twitter
Developer: Refy 🙂
Ny fampiharana fahefatra ao amin'ny lisitra dia iray amin'ireo rindranasa ireo izay efa elaela no natokana ho an'ireo mpampiasa Android izay mampiasa Twitter. Misaotra azy izahay fa hanao hahafahana mandamina ny fizotran-kevitsika amin'ny fomba izay tsotra sy mahazo aina kokoa ho antsika. Ankoatry ny fahafahantsika manolotra azy amin'ny fomba madio kokoa, mba tsy ho hitantsika ny atiny izay tsy mahaliana antsika na ny tsirontsika. Manome antsika asa fanampiny maro hafa koa izy io, toy ny fitantanana kaonty marobe, fampidirana amin'ny Facebook ary statistikan'ny kaontinay sy lahatsoratra. Ny sasany amin'ireo fiasa ireo dia mety ho an'ny olona miasa amin'ny fitantanana ny mombamomba ny media sosialy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Toy ny amin'ny tranga hafa dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny izahay. Ireo dia fividianana endri-javatra fanampiny sasany, saingy tsy ilaina izany.
TweetCaster ho an'ny Twitter
Developer: Fampiharana OneLouder
Na iza na iza nilaza fa ny ampahany faharoa dia tsy tsara mihitsy, izany dia satria tsy nisintona ny Fenix ​​2. Araka ny anarany, io no tohin'ny iray amin'ireo fampiharana Twitter malaza indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nihatsara ny lafiny maro izay nahatonga ilay voalohany tsy dia feno loatra na voadio tsara, noho izany dia maneho fiakarana am-pahamendrehana ho an'ireo mpampiasa liana amin'izany. Izy io dia manana endrika tsara, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra rehefa afaka mampiasa azy io, ary koa manome antsika asa tena ilaina. Afaka mitantana kaonty maromaro mora foana isika. Averina indray, fampiharana kalitao raha mitantana kaonty maromaro amin'ny tambajotra sosialy ianao.
Ny fandefasana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android dia mitentina 2,49 euro. Tsy dia avo loatra ny vidiny, indrindra raha jerentsika ny fampiasana lehibe ananan'ity rindranasa ity. Raha mila izany amin'ny asa ianao, dia vidiny tsy azo tsinontsinoavina ho an'ny antoko iray manontolo izay hahafahanao mahazo avy aminy.
Fenix ​​2 ho an'ny Twitter
Faranantsika amin'ity lisitra ity ity lisitra ity izay ahafahantsika mampiasa tsara kokoa ny fampiharana Twitter amin'ny finday Android. Izy io dia fampiharana izay miavaka avy hatrany amin'ny famolavolana Material Design. Ka ny fampiasana dia tsara foana amin'ny fotoana rehetra, ho an'ity endrika tsara ity, tena ahazoana aina sy natao ho mora ho an'ny mpampiasa. Hahafahantsika manamboatra lafin-javatra maro, miaraka amina 800 mahery mitambatra. Ho fanampin'izay, manana maody alina amin'ny fampiharana izahay ary manampy anay hanakana ny doka amin'ny tambajotra sosialy ihany koa.
Ny fandefasana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android dia mitentina 2,99 euro. Vidiny tsy dia lafo loatra izy io, ary mety hahasoa izany raha te hanana fampiasana tambajotra sosialy manokana sy manokana ianao. Raha miasa fitantanana mombamomba anao ao amin'ny Twitter ianao dia hahaliana anao izany.
Talon ho an'ny Twitter
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hanararaotana ny Twitter
Ny Nokia 5.1 Plus dia havoaka tsy ho ela any amin'ny firenena maro